Christie Agatha. Chiitiko chekuzvarwa kwake. Kusarudzwa kwemashoko | Zvazvino Zvinyorwa
Christie Agatha. Chiitiko chekuzvarwa kwake. Mutsara kusarudzwa
Mariola Diaz-Cano Arevalo | 15/09/2021 12:00 | Vanyori, Novela, Nhema nhema
Christie Agatha, zvisingarambiki Reina Del Chakavanzika and of the mutikitivha, ichiripo kwazvo kune vese mafeni eiyo genre. Uye nhasi izuva rake rekuzvarwa. Akatyora zvinyorwa zvese zvekutengesa muzuva rake neinenge 4.000 mamirioni emabhuku akatengeswa uye ramba uri panhandare. Uye zvakare, hupenyu hwake hwaive husina chakavanzika neaya mazuva gumi nerimwe aakange achishaya asingazive chaizvo zvaakaita. Uye, sezvo nhasi riri zuva rake rekuzvarwa, tichamuyeuka kamwe nekuiverenga neizvi kusarudzwa kwemitsara nezvidimbu Zvemabasa ake.
Christie Agatha. Kusarudzwa kwemitsara nezvidimbu
Fate dzimwe nguva inoita sekuseka vanhu nekutora mufaro mukuwana izvo zvavanoda kuchengeta zvakavanzika.
Chakavanzika chechitima chebhuruu
Dzimwe nguva ndinenge ndine chokwadi chekuti anopenga semuvengi uyezve paanenge ari paari kupenga zvakanyanya zvinoita senge kune nzira yekupenga kwake.
Iyo isinganzwisisike kesi ye Styles
"Zvinangwa zvekuuraya dzimwe nguva hazvikoshi, mhai."
"Ndezvipi zvinangwa zvakajairika, VaPoirot?"
"Chakajairika imari." Ndokunge, kukunda mumatanho ayo akasiyana. Zvino pane kutsiva uye rudo, uye kuchena kutya uye ruvengo, uye kubatsirwa.
"Ah hongu mhamha." Ndakanzwa nezve; vanoti A, kubviswa naB chete kuitira kuti C. Kuurayiwa kwezvematongerwo enyika kunowanzouya mumutambo mumwe chete. Mumwe munhu anoonekwa seanokuvadza kubudiriro uye anobvisirwa izvo. Vanhu vakadai vanokanganwa kuti hupenyu nerufu ibhizimusi raIshe akanaka.
Vakadzi vanoziva zvishoma churu chidiki, vasingazive kuti vari kuzviita. Pfungwa dzako dzisinganzwisisike dzinounganidza zvinhu zvidiki izvi pamwe chete uye zvinodaidza mhedzisiro intuition.
Kuuraya kwaRoger Ackroyd
Wese munhu anogara achiziva chimwe chinhu, "Adam akadaro," kunyangwe chiri chinhu chavasingazive ivo vanoziva.
Katsi iri mu dovecote
Hapana chinhu chinotyisa sekugara munzvimbo yekufungira, kuona maziso achikutarisa uye kuti rudo rwunochinja sei mavari nekutya, hapana chinotyisa sekufungidzira mumwe munhu wepedyo uye waunoda kwauri. Iyo ine chepfu, miasm.
Chakavanzika chegwara rezvitima
Mukadzi anonyepa riinhi? Dzimwe nguva ari oga. Kazhinji nekuda kwemurume waanoda. Nguva dzose kuvana vavo.
Kuuraya pane yegorofu
Chavanoda imwe nzenza muhupenyu hwavo. Ipapo vaisazove vakabatikana kumutsvaga mune vamwe vanhu.
Varume gumi vatema vakaenda kunodya. Mumwe akanyura uye vakasara: Vapfumbamwe.
Vapfumbamwe vatema vadiki vakanonoka kurara. Mumwe haana kumuka ivo ndokusara: Vasere.
Vatema vasere vatema vakafamba kuburikidza neDevon. Mumwe akapunyuka vakasara: Vanomwe.
Vakomana vadiki vanomwe vatema vanotema huni nedemo. Mumwe akatemwa nepakati uye ivo vakasara: Vatanhatu.
Vakomana vadiki vatanhatu vatema vaitamba nenyuchi. Mumwe wavo akarumwa nenyuchi uye vakasara: Vashanu.
Vashanu vashoma vatema varume vakadzidza zvemutemo. Mumwe wavo akawana doctorate uye vakagara: Vane.
Varume vana vadiki vatema vakaenda kugungwa. Hring tsvuku yakamedza imwe ivo ndokusara: Vatatu.
Vatatu vatema vadiki vakafamba vachipinda nemu zoo. Bheya rakavarwisa ivo ndokusara: Vaviri.
Varume vaviri vatema vaive vagere muzuva. Mumwe wavo akatsva ndokusara: Mumwe.
Mumwe murume mutema aive ega. Akazvisungirira, uye hakuna akasara.
Usambofa wakataura zvese zvaunoziva, kunyangwe kumunhu waunoziva zvakanyanya.
Kushushikana kutarisira chimwe chisikwa chemunhu kunogara kuchiunza kurwadziwa kupfuura mufaro; asi panguva imwecheteyo, Elinor, mumwe aisazove asina chiitiko ichocho. Chero ani zvake asina kumbobvira ada haana kumborarama.
Nzou dzinogona kurangarira, asi isu tiri vanhu uye nerombo rakanaka vanhu vanogona kukanganwa.
Nzou dzinogona kurangarira
Chokwadi ndechekuti vanhu vazhinji, kwete kusanganisa mapurisa, vane chivimbo chakanyanyisa munyika yakaipa iyi. Tenda zvakawandisa pane zvavanoudzwa. Handizviiti. Ndine urombo, asi ini ndinogara ndichida kuona pachangu zvinhu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » Christie Agatha. Chiitiko chekuzvarwa kwake. Mutsara kusarudzwa